Solfeggio yevana: zvakanakira kuenda kumimhanzi makirasi | Kuumbwa uye kudzidza
Solfeggio yevana: zvakanakira kuenda kumimhanzi makirasi
Maite Nicuesa | | Matipi
Vana vanowanzoenda zviitiko zvekunze Munguva yehudiki hwake, zvisinei, mashoma mashoma zviitiko zvakaita sekudzidzisa uye kudzidzisa semumhanzi. Conservatories uye mimhanzi zvikoro zvinopa yakazara dzidziso iyo inogona kupa akasiyana maonero: mimhanzi dzidziso makirasi, kudzidza kuridza chiridzwa kana zvakare, kuve chikamu cheyair kana rinoridza boka. Mimhanzi chikafu chendangariro nemoyo, nekudaro, kuenda kumimhanzi dzidziso makirasi kunotendera vana kubvisa kushushikana kwemabasa edzidzo. Asi pamusoro pezvo, uku kudzidziswa kunodzidzisawo kunzwisisika.
Kungofanana nedzidzo yekudzidzira inotevera kongiri mamiriro, iyo kudzidziswa muzvikoro zvemimhanzi zvakare ine makosi akasiyana.
Zvikonzero zvekuenda kumimhanzi dzidziso makirasi
1. Mwana anozove nemamiriro akasiyana pane echikoro. Izvi zvinokutendera iwe ita shamwari mune imwe nharaunda. Ita hushamwari nevatinoshanda navo vekugovana izvi zvakajairika.
2. Mudzidzi ane mukana weku tsvaga matarenda anogona zvemunhu izvo, kuburikidza nekudzidziswa zvishoma nezvishoma, zvinogona kutungamira kune wehunyanzvi kudanwa. Ndokunge, mukukura, vanhu vazhinji vanowana mari yekuwedzera nekubatana nemaorchestra.
3.Mimhanzi itsika nemagariro ayo vadzidzi vanowana ekutanga kana epamberi pfungwa dzemutauro wemimhanzi. Ruzivo urwu runopa zviwanikwa ku ongorora basa remimhanzi pakonzati.
4. Pamusoro pezvo, mimhanzi inosimudzirawo kusimudzira akapfuma mazwi sechiitiko chekunyunyutira mazwi erwiyo zvinoratidza. Nzira yekudzidzisa yekudzidza uchinakidzwa.
5. Vadzidzi vanopasa matambudziko matsva emunhu. Semuenzaniso, kudzidza mamakisi akaomarara. Uye izvi zvinounza pfungwa yakanaka yekuzviremekedza. Mwana anowana chirango chetsika dzakabatana nekuzorora kwetsika. Uye zvakare, zvikoro zvekuchengetedza pamwe nemimhanzi zvakare zvinoronga makonzati ayo vadzidzi vanotora chikamu. Ichi chiitiko chinounza hutano hutano hwekutarisira, kubatana pamwe uye kukunda kutya kwekuita pamberi pevanhu.
6.Mimhanzi zvakare inovandudza kutarisa kwenguva uye ndangariro. Naizvozvo, izvi zvakare zvine maitiro anovaka pazvidzidzo.
Kuenda kumimhanzi dzidziso makirasi mukana wekuwana kudzidza kwenguva refu muchiitiko chekupedza chikoro chiri kunyatso gadzirira ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Matipi » Solfeggio yevana: zvakanakira kuenda kumimhanzi makirasi
Parizvino Hutano Sayenzi mabasa
Ndeapi akachekwa manotsi